चन्द्रागिरी बैठक : नेकपाको 'ब्रेक थ्रु' या 'ब्रेक फेल'?
पार्टी एकताको बाकी कार्य सम्पन्न गर्न नसकी अलमलिएको नेकपाका चार नेताहरु एकाएक चन्द्रागिरि पुगेर २३ घण्टा आन्तरिक गृहकार्य गरेपछी यसलाई एकजना शिर्ष नेताले 'ब्रेक थ्रु' को संज्ञा दिएका छ्न । एक बाम बुद्धिजीवीको नजरमा 'एउटा कम्युनिस्ट पार्टिमा नाटकिय चमत्कारहरु 'ब्रेक थ्रु' होइन 'ब्रेक फेल'का रुपमा देखिन्छ्न । यहि नै इतिहासको सच्चाई हो ।' चन्द्रागिरी 'ब्रेक थ्रु' नै होस जसले नेकपाको एकीकरणलाई पूरा गरोस र समृद्धिको अभियानमा 'ब्रेक थ्रु'को नेतृत्व गर्ने नेकपा तयार पारोस। तर, कार्यकर्तामा थोपर्न खोजिएको नेतृत्वको करिस्मा र आबलम्बन गरिएको पद्धतिमा बलियो नेकपाको जग किन्चित भेटिदैन।
पार्टीमा जम्मा नौ जनाको सचिवालय छ । त्यसमा पनि माधब नेपाल र झलनाथ खनाल जस्ता वरिष्ठ नेताहरु छ्न । नौ सदस्यीय सचिवालयमा पार्टी नेतृत्व प्रती आलोचनात्मक दृस्ठिकोण राख्नेहरुलाई छाडेर कस्तो गृहकार्य सम्भब होला ? बैठक हो भने कुन समिती हो यो चार जनाको को ? या यो कुन तह हो ? एक नेता भन्छ्न यो सिर्फ नयाँ बर्षको सन्दर्भमा चन्द्रागिरी रिसोर्टको भद्दा बिज्ञापन हो ।
चन्द्रागिरी बैठक अन्ततः 'ब्रेक थ्रु' नै साबित होस । यसले शक्तिशाली नेकपा निर्माण गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानको नेतृत्व गरोस । तर यो सङै उठेका प्रश्न , आबलम्बन गरिएक पद्धति, नेकपाको लय र उपेक्षा गरिएका बरिस्ठ नेतागणहरु देख्दा भन्न ढिला भैसकेको जस्तो देखिन्छ - कि कतै 'ब्रेक फेल' भएर चन्द्रागिरी पुगेको त होइन ?